ISithembiso SEBUDLELWANE BABASEBENZI - Abenzi bezigidi. Sibonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kubaxhasi bethu. Isithembiso sobudlelwane babaxhasi, isibhambathiso sobudlelwane nabaxhasi kwizigidi zabenzi, isithembiso sobudlelwane babaxhasi kwizisombululo mm izisombululo, mm izisombululo, mm izisombululo inc, mm s
ISithembiso sokunxibelelana nabaxhasi
ISithembiso sokunxibelelana kwabathengi - IZIGIDI ZEZIGIDI
Sibonelela ngeenkonzo ngokuthe ngqo okanye ngentsebenziswano yethu kunye nokudibanisa kuwo wonke umhlaba kwaye injongo yethu ihlala ikukubonelela amaxabiso aphantsi kwinkonzo nganye kodwa kwinkonzo (ezithile) nakwamanye amazwe singabiza nge-5% ukuya kwi-15% xa kuthelekiswa nomboneleli weenkonzo onexabiso eliphantsi kwelo lizwe kodwa siyaqinisekisa ukuba zonke iinkonzo zethu ziyahlolwa, zihlaziyiwe kwaye zithembekile, njengokuba ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kakhulu nezisebenzayo kuphela ezinceda abathengi bethu ukuba bonge ixesha, imali kunye nezinye izibonelelo ngokufumana okona kulungileyo, ukuze, abathengi bethu bangaze bazisole ngokuchitha ixesha labo, imali kunye nezixhobo.
Sisoloko sizama ukubonelela ngeyona nto ifanelekileyo ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Ngamava ethu, siyazi ukuba ukoneliseka kwabaxhasi bethu kunye nempumelelo yimpumelelo yethu. Isibambiso sobudlelwane nabaxhasi bezigidi zabathengi bethu zezi zilandelayo:
Uyakuphathwa ngembeko nangentlonelo kunxibelelwano lwakho nathi.
Kwimicimbi enxulumene nokuFudukela kwelinye ilizwe, umthengi uya kubonelelwa ngokubonisana negqwetha, uxanduva oluphambili, inkcazo eneenkcukacha, kunye neempendulo kwimibuzo yabathengi.
Kwimiba enxulumene nokwenziwa kweenkampani kunye nokuvulwa kweakhawunti yebhanki, umthengi uya kubonelelwa ngothethathethwano ngabacebisi kwezorhwebo, uxanduva oluphambili, inkcazo eneenkcukacha, kunye neempendulo kwimibuzo yabathengi.
Ukuvavanywa okunyanisekileyo okusekwe kwiimfuno kunye nenkcazo yazo naziphi na iindlela ezikhoyo.
Asikukhuthazi iinkonzo ukwenza nje iifizi.
Ukuba umthengi ukhetha ukugcina iinkonzo zethu, sibathumela isiVumelwano seNtlawulo esibhaliweyo esichaza imigaqo yeenkonzo.
Ukuba ukhetha ukugcina iinkonzo zethu, umxhasi uyavuma ukuba angabuyiselwa imali ngayo nayiphi na intlawulo ehlawulwe ngayo nayiphi na inkonzo. Sisoloko sibonelela ngeenkonzo ezinyanisekileyo kwaye xa inkonzo inikiwe akukho ndlela yokubuyela umva njengoko ezi ziinkonzo zobungcali ezingenakulinganiswa kwaye zibuyiswe njengemveliso.
Abaxhamli abanamalungiselelo emirhumo “ethe tyaba” bahlawula umrhumo omnye wokuhlawulela yonke inkonzo echazwe kwisiVumelwano seNtlawulo. Asibizi imali eyongezelelweyo ngeefowuni, ii-imeyile, okanye iintlanganiso. AKUKHO BOTSHAZI or IINDLEKO EZONGEZELELWEYO Ukudibana okungaphezulu, ukuba kuyafuneka.
Udliwanondlebe lokufudukela kwelinye ilizwe ukuba kuyafuneka, intlanganiso yokulungiselela udliwanondlebe negqwetha ibandakanyiwe kwimirhumo yethu.
Kudliwanondlebe lokuvula i-akhawunti yebhanki ukuba iyafuneka, intlanganiso yovavanyo lodliwanondlebe nomcebisi ngeshishini / igqwetha lifakiwe kumrhumo wethu.
Imibuzo yabathengi e-Onboarded ihlala iphendulwa nge-1 yosuku lweshishini okanye kwangoko kwangoko kuxhomekeke kumahluko wexesha.
Sinika ithuba lokuphumelela ngokubonisa olona nyango lusemgangathweni ngendlela efanelekileyo.